पूर्वराजाले कोबाट आश गरेको ?
हालै सञ्चारमन्त्रीको एउटा फोटो भाइरल भयो । फूलको मालाबाट पुरै अनुहार ढाकिएका मन्त्रीको खाली एउटा आँखामात्र खुलेको थियो र त्यो फोटोको क्याप्सनमा लेखिएको थियो– दशैं भत्ता वितरण गर्दा भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्रीलाई उनकै गृह काभ्रेमा यति भव्य स्वागत । यस्ता छन् नेपाली जनता ।
मन्त्री भ्रष्ट भनेर प्रमाण पनि दिन्छन्, तिनै मन्त्रीलाई यसरी स्वागत पनि गर्छन् । तर्कशास्त्रीहरु तर्क गर्छन्– झापामा पूर्वराजाको भव्य स्वागत भयो । पूर्वराजा जता जान्छन्, भव्य स्वागत हुन्छ, गगनभेदी नारा लाग्छ– राजा आउ देश बचाउ । यदि भोलि प्रचण्ड वा ओली त्यस क्षेत्रमा गए भने त्यस्तै स्वागत तिनै जनताले गर्छन् । अझ स्कूले नानीहरुलाई स्कूल विदा दिएर माष्टरसमेत स्वागत गर्न पुग्छन् । यो हो नेपाली जनताको चरित्र । जनता प्रष्ट छन्, देउवा, प्रचण्ड र ओलीले देश डुबाए भन्ने । तर व्यवहारमा जनता मान्देैनन् ।
केही महिनाअघि उपचुनाव भयो । नयाँ दल कसले जित्यो ? यी पार्टीहरुमाथि नातावाद, कृपावाद, नगदवाद, राष्ट्रघातको आरोप लागिरहेको छ । तर जनता सजाय होइन, पुरस्कार दिन्छन् । चुनाव जिताउँछन् । अन्य देशमा जनताले गलत गर्नेलाई चुनाव हराएर दण्ड दिन्छन् । नेपालमा ? रौतहटतिरका एक बुद्धिजीवी भन्दै थिए– भ्रष्टाचार गर्ने अनिल झा, फेरि पनि चुनाव जित्छन् । जो भ्रष्ट छ, उसैलाई चुनाव जिताउने जनताले दुःख नपाए कसले पाउँछन् । यसरी मौका पाएपछि भ्रष्ट नेताहरुले राष्ट्र डुबाउनु स्वभाविक हो ।
०४६ साल अघि जनता देशको चिन्ता गर्थे, त्यसपछिका जनता पार्टीको, पार्टी नेताको चिन्ता गर्छन् । नेताको चिन्ता गर्नेले नेपालको स्वाधीनता रसातल पुगेको देख्दै देख्दैनन् । आफै पीडित छन्, पीडकलाई फूलका माला पहिराइरहेका छन् । नेपाली जनता यसरी शक्ति र पैसाको पूजा गर्ने पो भए । यती समूहले सरकारलाई बसमा पारेछ र राष्ट्रिय सम्पत्ति धमाधम सयौं वर्षका लागि हात पारिरहेको छ । जनतलो देखेका छन्, बुझेका छन्, तर बोल्दैनन् । बिद्रोह गर्दैनन् । एक जमाना थियो, जब सूर्य अस्त नेपाल मस्त । आज पनि हालत त्यस्तै छ ।
भ्रष्ट मन पराउने जनता नै राष्ट्रघात चाहन्छन् । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक भारतले खाइसक्यो, जनता बोल्दैनन् । आफैले जिताएको सरकारसँग हाम्रो देशको नक्सा खोई समेत भन्दैनन् । हिजो सीमा मिचियो भनेर उफ्रनेहरु आज किन मौन भए ? कसले चुप बनायो ? आज राष्ट्रियताको मुद्दामा कसले उठाइरहेको छ ? उठाउने थोरै छन्, तिनलाई जनताले किन साथ दिइरहेका छैनन् ? खाने खाइरहेका छन्, लुट्ने लुटिरहेका छन्, लोकतन्त्र छ, लोक मरिरहेका छन् । लोक जानकार छ तर लोकमा विवेक हराउँदै गएको छ ।
यी जनताको विश्वास गरेर बिद्रोह गर्ने पूर्वराजाले ? जनताको चरित्र आशलाग्दो होइन, निराशलाग्दो छ । जनतामाथि नै घात गर्ने नेतालाई बोक्छन् जनता । लोकतन्त्र भ्रष्टाचारतन्त्र नभए के हुन्छ अनि । यही हिसावले त मुलुक नै नरहलाजस्तो देखिन्छ । किनभने जनता यिनै हुन्, जो शक्तिशाली निर्णायक छन्, आफ्नै शक्ति चिन्दैनन् । गलत निर्णय गर्छन् ।
राजावादीहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने विदेशीले टिपेर राजतन्त्र पुनस्र्थापना गरिदिने होइन । जनता नै अघि सर्नुपर्छ, जनताकै आवश्यकतामा धर्म अथवा तन्त्र स्थापित हुने हो । नेतालाई घृणा गर्ने, चुनावमा जिताउने, देख्यो कि माला पहिराउने ? नेताले देशै बेच्दा, देशको रक्षा गर्न नसक्दा, नागरिकको सुरक्षा नगर्दा पनि नेतातन्त्र चलिरहेकै छ । चुपचाप सहिरहने जनता भएपछि यस्ता जनताको भरमा केही हुन्न । जबसम्म जनताले परिवर्तनका लागि कम्मर कस्दैनन्, तवसम्म केही हुन्न । सडकमा नारा लगाएका भरमा परिवर्चन आउन्न किनकी त्यो नारा नेता देख्नासाथ बदलिने गरेको छ । नैतिकता भनेको बाँकी छैन नेताहरुमा, प्रशासकहरुमा, न जनता बोल्छन्, न पार्टीका कार्यकर्ताहरु । एउटा अनुसनधानमा दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरुमा नेपाली जनता लोकतन्त्रप्रति बढी असन्तुष्ट छन् भनेर सार्वजनिक भएको छ । यो जनमत सही हो । तर असन्तुष्टिलाई सन्तुष्टिमा बदल्ने प्रयास कोही कोही गदैनन् । विकल्प न जनता खोज्छन्, न जनतालाई कसैले तैयार नै पार्छन् । असन्तुष्ट जनता तिनै भ्रष्ट नेतालाई बोक्छन्, तिनका भाषणमा ताली ठोक्छन् । वीर नेपालीको अवसरवादी चरित्र बनिसकेको छ । विदेशीले खेले, अझ खेल्छन्, मैदान दिएपछि ।